संगम र सत्य शुभकामना कपको क्वाटर फाइनलमा. – Sabaikoaawaj.com
संगम र सत्य शुभकामना कपको क्वाटर फाइनलमा.
सोमवार, बैशाख ४, २०७४ 9:21:14 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, ४ वैशाख/ हेमजा युनाइटेडद्वारा आयोजित शुभकामना कप नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा संगम युवा क्लब र सत्य युवा क्लब वाँझापाटन क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सोमबार पहिलो खेलमा स्याङ्जा– ११ स्याङ्जाले वाक ओभर दिएपछि संगम युवा क्लब क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो।
सोमबार नै भएको दोस्रो खेलमा सत्य युवा क्लब वाँझापाटनले खैरेनीटार युवा क्लब खैरेनीटारलाई ६–१ गोल अन्तरले पराजित ग¥यो। सो खेलमामा सत्य युवा क्लबका विदेशी खेलाडि सामसुर्कले ह्याट्रिक गर्दा अजय विकले दुई र प्रविन गुरुङले एक गोल गरे।
खैरेनीटार युवा क्लब खैरेनीटारको तर्फबाट विजय आलेले सान्त्वना गोल गरे। उक्त खेलमा सत्य युवा क्लबका सामसुर्क म्यान अफ दि म्याच घोषित भए।
प्रकाशित मितिः सोमवार, बैशाख ४, २०७४ 9:21:14 PM